Lokho okubandakanya imibono ikakhulu kusho imisebenzi kaNkulunkulu uqobo, futhi lokho kubandakanya ukwenza okumele kwenziwe umuntu, futhi akuhlangene nhlobo noNkulunkulu. Umsebenzi kaNkulunkulu uqedelwa uNkulunkulu qobo, futhi ukwenza komuntu kufezwa umuntu uqobo. Lokho okumele kwenziwe uNkulunkulu uqobo akudingeki ukuthi kwenziwe umuntu, futhi lokho okumele kwenziwe umuntu akuhlangene noNkulunkulu. Umsebenzi kaNkulunkulu uyinkonzo Yakhe yedwa, futhi ayihlangene nomuntu. Lo msebenzi akudingeke ukuthi wenziwe umuntu, futhi, phezu kwalokho, umuntu angeke akwazi ukwenza umsebenzi owenziwa uNkulunkulu. Lokho okudingeka ukuthi kwenziwe umuntu kumele kufezwe umuntu, ngisho noma kungaba ukunikela ngempilo yakhe, noma ukuzihambisa kuSathane ukuze abe wufakazi - lokhu kumele kufezwe umuntu. UNkulunkulu uqobo uqedela wonke umsebenzi okumele awenze, futhi lokho okumele kwenziwe umuntu uyakukhonjiswa, kuthi umsebenzi osele usalele umuntu. UNkulunkulu akawenzi umsebenzi wokwengeza. Wenza umsebenzi Wakhe kuphela, futhi ukhombisa umuntu indlela kuphela, futhi wenza umsebenzi wokuvula indlela, akawenzi umsebenzi wokuphendla indlela; lokhu kumele kuqondwe umuntu. Ukwenza iqiniso kusho ukwenza amazwi kaNkulunkulu, futhi lokhu kuwumsebenzi womuntu, futhi yikho okumele kwenziwe umuntu, futhi akuhlangene nhlobo noNkulunkulu. Uma umuntu ephoqa ukuthi uNkulunkulu ahlupheke futhi acwenge iqiniso, ngendlela efana neyomuntu, umuntu usuka enza ukungalaleli. Umsebenzi kaNkulunkulu ukwenza inkonzo Yakhe, futhi umsebenzi womuntu ukuhlonipha ukuhola kukaNkulunkulu, ngaphandle kokuphikisa. Lokho okumele umuntu afinyelele kukho kumele kwenzeke, ngisho noma uNkulunkulu esebenza noma ephila ngayiphi indlela. NguNkulunkulu uqobo kuphela ongadinga okuthile kumuntu, okusho ukuthi, uNkulunkulu uqobo okufanele afune okuthile kumuntu. Umuntu kumele angabi nokunye angakwenza, kumele angenzi lutho olunye ngaphandle kokuthoba nokwenza ngokuphelele; yilo mqondo umuntu okumele abe nawo. Uma umsebenzi okumele wenziwe uNkulunkulu uqobo usuphelele, kudingeka umuntu adlule kuwo, isinyathelo ngesinyathelo. Uma, ekugcineni, kuthi sekuqedwe wonke umsebenzi wokuphatha kaNkulunkulu, umuntu engakakakwenzi lokho okudingwa uNkulunkulu, kuyofuneka ukuthi umuntu ajeziswe. Uma umuntu engagcwalisi lokho okudingwa uNkulunkulu, lokhu kuyobe kungena yokungalaleli komuntu, akusho ukuthi uNkulunkulu akawenzisisanga umsebenzi Wakhe. Bonke labo abehluleka ukwenza amazwi kaNkulunkulu, labo abehluleka ukugcwalisa okudingwa uNkulunkulu, kanye nalabo abehluleka ukwethembeka nokufeza umsebenzi wabo – bayojeziswa bonke. Namuhla, okudingeka ukuthi ukufeze akusikho okungeziwe, kodwa umsebenzi womuntu, futhi yilokho okumele kwenziwe ngabantu bonke. Uma wehluleka nawukwenza umsebenzi wakho, noma ukuwenza kahle, awuzibizeli yini izinkinga? Awuzimemeli ukufa? Usangalindela kanjani ikusasa nempumelelo? Umsebenzi kaNkulunkulu wenzelwe isintu, futhi ukusebenzisana komuntu kwenzelwe ukuphatha kukaNkulunkulu. Emuva kokuba uNkulunkulu esenze konke okumele akwenze, umuntu kusadingeka ukuthi angaphazami kokwakhe ukwenza, futhi asebenzisane noNkulunkulu. Emsebenzini kaNkulunkulu, umuntu kumele angashiyi lutho, kumele azinikele ngokwethembeka, futhi angabi nemicabango eminingi, noma ahlale dekle alindele ukufa. UNkulunkulu angazinikela ngenxa yomuntu, pho kungani umuntu ehluleka ukwethembeka kuNkulunkulu? UNkulunkulu unhliziyo-nye futhi umqondo-munye nomuntu, pho kungani umuntu engeke asebenzisane naye kancane? UNkulunkulu usebenzela isintu, pho kungani umuntu ehluleka ukwenza omunye umsebenzi wakhe ngenxa yokuphatha kukaNkulunkulu? Umsebenzi kaNkulunkulu sewuhambe wafika lapha, kodwa usabuka kodwa ungenzi lutho, uyezwa kodwa awunyakazi. Abantu abanjalo abafanele ukulahlwa? Ngoba uNkulunkulu usenikele ngakho konke okwakhe kubantu, pho kungani, namuhla, umuntu ehluleka ukwenza umsebenzi wakhe ngokuzinikela? NgokukaNkulunkulu, umsebenzi wakhe yiwo oseqhulwini, futhi umsebenzi wokuphatha Kwakhe usemqoka. Ngokomuntu, ukwenza amazwi kaNkulunkulu nokugcwalisa lokho okudingwa uNkulunkulu yikho okuseqhulwini kuye. Kumele nonke nikuqonde lokhu. Amazwi akhulunywe kuwe afinyelele emongweni wengqikithini yakho, futhi umsebenzi kaNkulunkulu ufike ezingeni elingakaze libe khona. Abantu abaningi namanje abakaliqondi iqiniso noma ukulahlekisa kwale ndlela; basalindele futhi basabuka, futhi abawenzi umsebenzi wabo. Kunalokho, bahlola igama ngalinye kanye nezenzo zikaNkulunkulu, futhi bagxila kulokho aAkudlayo nakugqokayo, futhi ukucabanga kwabo kuba kubi kakhulu. Ngabe laba bantu abazikhathazi ngento engekho? Kungenzeka kanjani ukuthi abantu abanje kube yilabo abafuna uNkulunkulu? Futhi bangaba kanjani yilabo abanenhloso yokuthobela uNkulunkulu? Ukwethembeka nomsebenzi wabo abakubeki phambili emiqondweni yabo, kunalokho bagxila ekutheni uNkulunkulu ukuphi. Bayathukuthelisa! Ukuba umuntu usekuqondile okumele akuqonde, futhi usenze konke okumele akwenze, nakanjani uNkulunkulu uyobeka isibusiso Sakhe kumuntu, ngoba lokho akudingayo kumuntu kuwumsebenzi womuntu futhi kumele kwenziwe umuntu. Uma umuntu engakwazi ukuqonda okumele akuqonde, futhi engakwazi ukwenza okumele akwenze, umuntu uyojeziswa. Labo abangasebenzisani noNkulunkulu bayizitha zikaNkulunkulu, labo abangawamukeli umsebenzi omusha baphikisana nawo, yize labo bantu bengenzi lutho kusobala ukuthi bayaphikisana nakho. Bonke labo abangalenzi iqiniso elidingwa uNkulunkulu bangabantu abaphikisana nalo ngenhloso futhi abangawahloniphi amazwi kaNkulunkulu, noma ngabe labo bantu “bagxila ngokukhethekile” emsebenzini kaMoya oNgcwele. Abantu abangawalaleli amazwi kaNkulunkulu futhi abangamthobeli uNkulunkulu bayahlubuka, futhi baphikisana noNkulunkulu. Abantu abangawenzi umsebenzi wabo yilabo abangasebenzisani noNkulunkulu, futhi abantu abangasebenzisani noNkulunkulu yilabo abangawamukeli umsebenzi kaMoya oNgcwele.